Emulsification Factory - China Emulsification Vagadziri uye vanotengesa
3000W ultrasonic muchina we nanoemulsion homogenizer emulsifier
Nanoemulsion iri kuiswa zvakanyanya kukemikari, mishonga, zvekuzora, chikafu, zvigadzirwa zvehutano, kudhinda uye kudhiza maindasitiri. Ultrasonic emulsification inodonhedza pasi madonhwe emaviri kana anopfuura emvura kuburikidza ne20000 kudedera pasekondi, ichivaita kuti vasanganisane. Panguva imwecheteyo, kuenderera mberi kwekubuda kwemasanganiswa emulsion kunoita kuti madonhwe emvura emusanganiswa akasanganiswa asvike padanho re nanometer. ZVINOKOSHA: MUENZANISO JH-BL5 JH-BL5L JH-BL10 JH-BL10L JH-BL20 JH -...
Zvinyorwa zveCannabis (CBD, THC) ndeye hydrophobic (kwete mvura inogadzikana) mamorekuru. Kuti tikunde kusakanganisika kwe cannabinoids mumvura yekumikidza zvinodyiwa, zvinwiwa uye mafuta, nzira chaiyo yekumisikidza inodiwa. Ultrasonic yakakosha CBD oiri emulsifier inoshandisa mehendi sheer simba reiyo ultrasonic cavitation kudzikisa iyo droplet saizi ye cannabinoids kugadzira nanoparticles, inozove iri diki pane 100nm. Ultrasonics inyanzvi inoshandiswa muhunyanzvi muindasitiri yemishonga f ...
Ultrasonic cosmetic yakapararira emulsification michina
Ultrasonic michina inogona kushandiswa mukushambadzira ndeyekubvisa, kupararira uye emulsification. KUSVIRA: Kubatsira kukuru kweiyo ultrasonic kuburitsa ndiko kushandiswa kwe green solvent: mvura. Zvichienzaniswa nesimba rinogumbura rinoshandiswa mune chinyakare kuburitsa, kucherwa kwemvura kune zvirinani kuchengetedzwa.Panguva imwecheteyo, ultrasound inogona kupedzisa kuburitsa mune yakaderera tembiricha nharaunda, kuona chiitiko chehupenyu hwezvinhu zvakatorwa. Kupararira: Iyo yepamusoro sheari simba rakagadzirwa ...
Ultrasonic zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa
Shandisa green solvent: mvura.
Dipserse iwo ma particles mu nano zvikamu.
Sanganisa zvizere zvigadzirwa zvakasiyana uye nekuvandudza kushanda kwemafuta.
Biodiesel chimiro chemafuta edhiziri anotorwa kubva muzvirimwa kana mhuka uye anosanganisira marefu-cheni ane mafuta asidi esters. Iyo inowanzo gadzirwa nemakemikari anoita lipids senge mafuta emhuka (tallow), mafuta e soya, kana mamwe mafuta emiriwo ane doro, inogadzira methyl, ethyl kana propyl ester. Chinyakare michina yekugadzira biodiesel inogona kungogadziriswa mumabatch, zvichikonzera kushomeka kwekugadzira kugona. Nekuda kwekuwedzeredzwa kweakawanda emulsifiers, goho uye mhando yebiodiesel vari ...
Ultrasonic emulsification michina ye biodiesel
Biodiesel musanganiswa wemafuta emiriwo (senge soya nembesa yezuva) kana mafuta emhuka nedoro. Icho chaicho chiitiko che transesterification. Matanho ekugadzira eBiodiesel: 1. Sanganisa mafuta emiriwo kana mafuta emhuka ne methanol kana ethanol uye sodium methoxide kana hydroxide. 2. Magetsi kudziisa mvura yakasanganiswa kusvika pa45 ~ 65 degrees Celsius. 3. Ultrasonic kurapwa kwemhepo inopisa yakasanganiswa mvura. 4. Shandisa centrifuge kupatsanura glycerin kuwana biodiesel. ZVINOKOSHA: MUENZANISO JH1500W-20 JH20 ...
ultrasonic cannabis oiri emulsification chishandiso chenano-emulsion
Iwo maCBD dumbu anogona akapararira pazasi zana nanometer kuburitsa yakaderera viscosity uye yakagadzikana nanoemulsion. Yakanyanya kuvandudza kushandiswa kweCBD.
Ultrasonically inogadzirwa CBD emulsion emafuta anowanzo gadzikana pasina kuwedzera emulsifier kana surfactant. Hupenyu hwemidziyo yedu hunodarika maawa zviuru makumi maviri uye hunogona kuramba ruchienderera kwemaawa makumi maviri nemana pazuva.
1.5 ~ 3KW simba, 8 ~ 100μm amplitude, 10 ~ 25L / min. Kuyerera rate. Inogona kuparadzira CBD kusvika pazasi pane 100nm. Inogona kuita kuti CBD iite basa riri nani muzvigadzirwa zvakasiyana zvekuchengetedza ganda nemishonga yekushandisa kwekunze nekunze.